DHEGEYSO-Gudiga doorashooyinka heer Puntland oo qaadacay goa’aanka gudiga X.khilaafaadka. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Gudiga doorashooyinka heer Puntland oo qaadacay goa’aanka gudiga X.khilaafaadka.
Diseembar 14, 2016 9:57 g 0
Garoowe, Dec 15 2016-Guddiga Doorashooyinka Dadban ee Maamulka Puntland ayaa ka soo horjeestay go’aanka Guddiga xalinta Khilaafaadka ay ku amreen in Doorashooda dib loogu laabto xubno lagu doortay Magaalada Garowe.
Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Dadban ee Maamulka Puntland Nabadoon Khaliif Aw-Cali ayaa sheegay in aysan quseyn go’aanka Guddiga Xalinta Khilaafaadka ay ku go’aamiyeen in dib loogu laabto xubno lagu doortay Magaalada Garowe ee caasimada Maamulka Puntland.
Barlamaanka cusub oo ladhaarinayo iyo madaxweyne Gaas oo ku wajahan Muqdisho.